Fafhaahin kasoo baxaysa Qarax ka dhacay Magaalada Baydhoba | KEYDMEDIA ONLINE
Fafhaahin kasoo baxaysa Qarax ka dhacay Magaalada Baydhoba
BAYDHOBO (Keydmedia) - Fahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa Qarax Khasaaro geestay oo Shalay gelinkii danbe ka dhacay Suuq Qudaarata lagu iibiyo oo ku yaalla magaalada Baydhoba ee Xaruunta Gobolka Baay.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Gaashaandhigga ee Xukuumadda KMG Soomaaliya Maxamed Cali Catoosh oo ku sugan Magaalada Baydhabo ayaa waxaa uu sheegay in Howlgallo Xalay ay Ciidamada dowlada ka sameyeen Magaaladaasi ay gacanta kusoo dhigeen,Qof uu sheegay inuu ka dambeeyay Qaraxa.
Wasiir ku xigeenka ayaa beeniyay Wararka sheegaya in Qaraxa lagu dhex riday mid ka mid ah Jawaannada Haweenkii Qudaarta ku iibinayay Suuqaasi,isagoo sheegay in uu ahaa Miino Goobta lagu diyaariyay oo la dawacsanaa in lala eegto Ciidamada dowlada KMG.
Suuqa Qudaarta lagu iibiyo ee ku yaalla Baydhabo ayaa waxaa Shalay ka dhacay Qarax geystay Khaasaro isugu jira Dhimasho iyo Dhaawac, iyadoo Qaraxaasi ay ku dhinteen Labo Haween ah halka mid kale uu Dhaawac ka soo gaaray, kuwaasi oo dhammaantood ahaa Ganacsatadii Suuqaasi.
Tan iyo markii Magaalada Bayadho ay la wareegeen Ciidamada Dowladda Soomaaliya oo ay la socdaan kuwa Amxaarada ah ayaa waxaa magaaladaasi ka dhacayey dilal qorsheysan iyo Qaraxyo ay dad badan ku geeriyoodeen.
Howlgalka ayaa laga fuliyay tuulo ku taalla xuduuda kala qeybisa gobollada Shabeellooyinka, gaar ahaan meel ku dhaw degmada Balcad, oo qiyaastii 30-KM dhanka waqooyi uga beegan Muqdisho.
Shaqaale Hindi ah oo lagu afduubay Muqdisho
Warar 24 October 2020 7:12